Maqaallada Samir Sampat ee ku saabsan Martech Zone |
Maqaallada by Samir Sampat
Waqtigu waa wax kasta oo ganacsiga ah. Waxay noqon kartaa faraqa u dhexeeya macmiil cusub oo suurtagal ah iyo in la xidho. Lama filayo inaad gaadho hogaanka iibka isku dayga wacitaankaaga ugu horeeya. Waxay qaadan kartaa dhowr isku day sida cilmi-baadhisyada qaar ay soo jeedinayaan inay qaadan karto ilaa 18 wicis ka hor inta aanad gaadhin hogaanka taleefanka markii ugu horeysay. Dabcan, tani waxay ku xidhan tahay doorsoomayaal iyo duruufo badan, laakiin waa mid